Mbido EGO AFRICAN FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Ivory Coast Serge Aurier nwata akụkọ akụkọ gbasara eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara “Bison“. Anyị Serge Aurier Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge.
Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama ama, ndabere ezinụlọ na mmekọrịta mmekọrịta. Dika ozo, otutu ihe ndi ozo banyere ya.
Juan Foyth Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Akụkọ
Ee, onye ọ bụla maara banyere ụlọ ya na nkwonkwo akwara. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle Serge Aurier's Bio nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Serge Aurier Akụkọ nwata - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Malite, Serger Aurier mụrụ na 24th ụbọchị nke December 1992. A mụrụ ya na nne na nna ya, Mr na Mrs. Leon Gbizie na mpaghara dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ nke Ivory Coast, n'ime obere obodo a na-akpọ Danane.
Davinson Sanchez Ụmụ Akụkọ Akụkọ Na-emeghe Eziokwu
A mụrụ Serge dị ka nwa nke abụọ nke ụmụaka ise. Ọ tolitere n'ụlọ egwuregwu bọọlụ na -ekele nna ya bụ onye bụbu onye egwuregwu bọọlụ ọkachamara.
Leon Gbizie mgbe ọ lara ezumike nka ghọrọ onye enyemaka nchịkwa n'ụlọ ikpe mpaghara dị na Ouragahio, Ivory Coast. N'okpuru bụ foto Leon na nwa ya nwoke.
Serge Aurier jiri afọ itoolu nke ndụ ya na nne na nna ya tupu ha agbawa na ịgba alụkwaghịm bụ nke gosipụtara mmalite nke nsogbu ya.
Ben Davies Ụmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Agbanwe
N'afọ 1992, mgbe Serge dị afọ 10, agha obodo dara na obodo ya Ivory Coast. N'okpuru arịrịọ nne ya, obere Serge ga-eso ya kwaga France na-ahapụ nna ya n'Africa.
Serge Aurier Biographymụaka Akụkọ nke Na - Ndụ na Paris:
Mgbe ọ bịarutere France, nne Serge hụrụ ịhụnanya ọzọ mgbe di ya gbara alụkwaghịm. Ọ zutere ma lụọ onye ọkwọ ụgbọ ala aha ya bụ Michel Aurier onye nabatara iku nwa ya nwoke.
Pierre-Emile Hojbjerg Akụkọ nwata na gbakwunyere Eziokwu Akụkọ ndụ
Ọ bụ n'oge a Serge nwetara aha nna "Aurier". Serge biri na nne ya, nwanne nna ya na nwanne ya nwoke, Christopher na agbata obi Sevran dị na mpaghara Paris.
Dị ka ọtụtụ ndị si mba ọzọ kwabata na Africa, ezinụlọ Sergi Aurier chọtara onwe ha ka ha tọrọ n'ime otu n'ime ógbè ndị kasị daa ogbenye nke isi obodo France.
A na -akatọ agbata obi Sevran maka akụkọ mpụ ya, mmebi iwu ya, ime ihe ike na enweghị ọrụ zuru oke. N'eziokwu, o nweghị mgbe a jara ọgbakọ ahụ maka ịdị n'otu.
Akụkọ nwata nke Noni Madueke gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ
Ị maara… Sevran, otu obodo French ahụ ghọrọ onye ama ama maka ụnwụ nri ụbọchị isii nke onye isi obodo ya nwere dike Stephane Gatignon.
Stephane gara wee kwụsị ịga agụụ na -agụsi agụụ ike ịrịọ gọọmentị ka o nyere aka tinye ego iji belata nsogbu dị na mpaghara ahụ. N'okpuru bụ foto onye isi obodo dike.
Aurier kwetara na mgbe ọ bụ nwata, mpụ na-esikwu ike. N'ikwu nke a, oge ntorobịa ya na Sevran abụghị onye aka ya dị ọcha. N'okwu ya;
"Sevran emewo ka obi dajụọ. Tupu, ọ dị ize ndụ karị, nke ka njọ. Ọ bụ ihe ịtụ egwu. E nwere nsogbu n'ebe nile
N'oge ahụ, ana m eso ndị nwere aha ọjọọ. O siri ike izere ya mgbe ị bi ebe a. Nke ahụ wusiri m ike ”
Ruo ugbu a, Aurier agbachapụbeghị onyinyo nke mmụọ iwe dị mkpụmkpụ nke etolitere n'oge ọ bụ nwata n'oge ọgba aghara ezinụlọ, yana mmekọrịta mmekọrịta siri ike.
Serge Aurier Biographymụaka Akụkọ - Ihe Nlekọta Ọrụ:
N'ịbụ onye tolitere n'obodo na -ese okwu, enweghị isi kwụsịrị Serge mgbe enwere football n'ụkwụ ya.
Mr Afid Djaadaoui chọtara ezi mmasị Serge maka bọọlụ (lee n'okpuru) onye bụ onye na -ahụ maka mmemme egwuregwu mepere emepe na Sevran.
Afid bukwa onye kere “Mgbochi site na egwuregwu ”, a mmemme nke mere ka Aurier na nwanne ya nwoke Christopher sonyere ụmụaka ndị ọzọ na-egwu egwuregwu asọmpi.
Kyle Walker Ụmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu na-enweghị isi
Serge Aurier Biography nwata - ọnwụnwa:
N'agbanyeghị ịga ụlọ akwụkwọ, Serge ghọrọ akụkụ nke asọmpi agbata obi a na -eme na Wednesde na Satọde.
N'ịbụ onye ji aghụghọ ya rafuo ndị na -ekiri ya, Serge na mbido Ọgọst 2005 malitere inweta onyinye maka ule U13. Ọ nwere ule na -aga nke ọma na klọb bọọlụ Villepinte.
Mgbe a na-egwuri egwu maka ụlọ ọrụ ndị ntorobịa, a hụrụ Serge dị ka onye nwere nnukwu mkpebi siri ike ime ka nrọ ya ọkachamara mezuo. Ọbụna mgbe ọ na-eduga ndị otu ya na mmeri, ọchịchọ ya abụghị nanị ihe na-agafe agafe.
Na-etolite etolite, Aurier malitere inweta aha otutu nke Meelele na Essien n'ihi na ọ na-arụ ọrụ ha ma nwee ahụ ha na n'ụzọ nkà. Ọ dị obere, ma ọ dị mma ma bụrụ ebe ọ bụla.
Aurier na-enwu ruo n'ókè nke na ọ hapụrụ Lens ngwa ngwa, ebe ya na nwanne ya nwoke, Christopher bịanyere aka n'akwụkwọ. Mgbe ị bịanyere aka n'akwụkwọ maka cub ahụ, ụmụnne abụọ ahụ ga-ahapụ ndị ezinụlọ ha na ndị enyi ha n'azụ.
Serge Aurier Bio - Bilie na-ewu ewu:
Aurier onye dị obere mgbe ọ ghọrọ onye isi nchekwa ụlọ klọb bọọlụ Len. A bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya mgbe ọ dị afọ 16 na 2009. Ịbanye n'ime ndị otu Lens n'afọ nke abụọ kpaliri mmasị klọb ndị France ndị ọzọ.
Na 2012, Aurier nwetara ebe akwagara Toulouse. Ọ malitere igwu egwu dịka ihe nchebe azụ ma mezuo nkà nchebe ya na ụlọ.
N'ịbụ onye dị ize ndụ na mbinye aka na ebe ewusiri ike nwere mmasị nke PSG onye were ya na mbinye ego tupu akara nkwekọrịta na-adịgide adịgide.
Na mkpokọta, Serge meriri nnukwu iko iri na otu na Njikọ French tupu o kpebie na ọ bụ oge ịkwụsị ọgbakọ.
Na 31 August 2017, Aurier bịanyere aka n'akwụkwọ maka Premier League club Tottenham Hotspur maka ego na mpaghara £ 23 nde. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ndụ mmekọrịta Serge Aurier:
Ọ bụ ezie na njikọta nke ndị na-agba ọsọ n'Africa dị elu na ụdị ihe nlereanya ha dị egwu aghọwo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ na-aga n'ihu, ọ bịara dị ka ihe ijuanya na Serge ka na-azọrọ na ọ bụ di.
Dị ka n'oge ederede, Serge bụ BAE-obere ma zoo ndụ ya na ndị ọha.
Serge Aurier Biography - Nwepu Nna:
Leon Gbizie, nna Serge Aurier mere mkpu ọhaneze n'otu oge na -eme mkpesa na nwa ya agbahapụla ya ma leghara ya anya kpamkpam.
Gbizie kwuru na nwa ya leghaara ya anya ruo ọtụtụ afọ (kemgbe ọ hapụrụ nne ya gaa France). Ọ gwara ndị nta akụkọ Ivorian na ya enweghị ike ịchọpụta ihe kpatara ọ ga-eji bụrụ nna nwa nwoke nwere ọtụtụ ijeri mmadụ ma na-ebi ndụ dị ka onye ajọ mmụọ.
Dị ka Gbizie si kwuo, nwa ya nwoke anaghị ajụ ya ma ọ bụghị naanị ịkwụ ụgwọ ụlọ ọgwụ iji gwọọ ọrịa nke kpọnwụrụ ya. N'okwu ya;
"Ahụbeghị m nwa m n'afọ ndị na-adịbeghị anya. M na-agbalịrị ịbịakwute ya mgbe ọ nọ n'ogige ahụ na ndị otu mba. ọ na-egbochi m ma na-azaghachi ozi m mgbe nile site na otu n'ime ndị enyi ya, "
“Ihe kacha ewute m bụ na nwa m amaghịdị nsogbu m. Ọ na-enye m ego iji kpochapụ m. Ọ dịghị mgbe ọ kpọrọ m, nke ahụ bụ n'ihi- nne ya tinye ya n'isi “
Serge Aurier akụkọ nke na - Ndozi na nna:
Ịhụ ka nwa ya nwoke na -aza aha nwoke ọzọ wetara Gbizié Léon ihe mgbu. Otú ọ dị, otu ihe doro anya.
Ọ tụrụ anya na mkpu ọ ga -eti n'ihu ndị nta akụkọ ga -erute nwa ya nwoke. N'adịghị ka Mario Balotelli, ọnọdụ ahụ emesighi metụta mmekọrịta dị n'etiti Aurier na nna ya.
Ụbọchị O Mere: Ezigbo oge nke nchịkọta n'ikpeazụ weere n'etiti ndị ikom abụọ ahụ.
N'okpuru ebe a, foto nke Aurier na 2015 zutere nna ya na nkwari akụ Sofitel Ivoire mgbe afọ 14 ghara ịhụ ibe ya.
Serge Aurier Eziokwu Na-adịghị Eke - Njide Aka:
E jidere Serge n'otu oge ma boo ya ebubo n'ụlọ ikpe maka ịkpagbu onye uwe ojii na mpụga ụlọ oriri na nkwari abalị na Paris.
A mara ya ikpe, ntaramahụhụ maka nga ọnwa abụọ n'ụlọ mkpọrọ. N'ụzọ dị mma, e nyere Serge nnwere onwe ka ọ na -arịọ arịrịọ.
Njide a mere ka ọ ghara inwe ọganihu na itinye aka na UEFA Champions League egwuregwu megide Arsenal na 2016 dịka Visa enyere ndị Briten ka a napụrụ ya.
Ị maara?Tottenham ọbụna kpughere Aurier dị ka ihe ọhụrụ ha bịanyere aka na ya mgbe o chere ihu n'ụlọ ikpe iji mesịa nweta visa UK.
Serge Aurier Eziokwu nke Onwe:
Serge nwere ọnọdụ nnwere onwe dị n'ime nke na -enyere ya aka inwe ọganihu dị ukwuu na ndụ onwe ya na nke ọkachamara ya.
Ọ bụ onye na -amụta site na mmejọ na ike ya ị nweta elu dabere na ahụmịhe ya na nka ya.
Serge bụ onye ezumike nke Halloween nke maara otu esi enweta uwe kachasị mma maka abalị Halloween.
Aurier hụrụ ezigbo egwu dịka ọ bụ nnukwu onye na-agba hip hop. Ọ kpọrọ Shakira, Justin Bieber, na Sefyu n'etiti ndị ọzọ dị ka ndị ọhụụ kachasị amasị ya. Ọtụtụ mgbe, a na-ahụ ya na isi ya.
Nsogbu: A kọrọ na Aurier akpọwo ya Di Maria ka "ome ochi"Na Laurent Blanc"a homophobic slur". Omume a kpaliri mkpebi nke ndị njikwa PSG ịkwụsị ya.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akụkọ Serge Aurier Childhood akụkọ ya na akụkọ eziokwu ndị ọzọ.
Na LifeBogger, anyị na -agba mbọ maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ịhụ ihe na -adịghị mma n'isiokwu a, biko tinye nkọwa gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.
Akụkọ nwata Theo Hernandez gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ
Akụkọ nwata Graham Potter gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ
Emerson Royal Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Bryan Gil Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Ryan Mason Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Joe Rodon Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ